Public Kura | » मोतीपुरमा प्रहरीले किन चलायो गोली ? (भिडियो) मोतीपुरमा प्रहरीले किन चलायो गोली ? (भिडियो) – Public Kura
Video मुख्य समाचार
मोतीपुरमा प्रहरीले किन चलायो गोली ? (भिडियो)
भैरहवा– रुपन्देहीमा निर्माणाधीन मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रमा जग्गा कब्जा गर्ने समूहलाई हटाउन खोज्दा सुरक्षाकर्मी र उनीहरुबीच आइतबार करिब दुई घण्टा झडप भयो । जग्गा कब्जा गर्न आएका व्यक्तिले ढुंगामुडा मात्रै गरेनन् पेट्रोल बमसमेत प्रहार गरे । स्थिति तनावपूर्ण भएपछि सुरक्षाकर्मीले हवाई फायर गरे । प्रहरीले चलाएको गोली लागेर ४ जनाको मृत्यु भएको छ ।
सुरक्षाकर्मीसहित ७३ जना घाइते भएका छन् । थप क्षति रोक्न सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरिएको छ । शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने भन्दै स्थानीय प्रशासनले आइतबारदेखि अनिश्चितकालिन कफ्र्यु लगाएको छ ।
२०७२ चैत १ मा रुपन्देहीको मोतीपुरमा ५ वर्षभित्र औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने घोषणा भएको थियो । जुन बुटवल उपमहानगरपालिकासहित तिलोत्तमा नगरपालिका, सियारी र शुद्धोधन गाउँपालिकासँग जोडिएको तिनाउ नदी उकास क्षेत्रको सार्वजनिक जग्गा हो ।
०७३ वैशाख २९ मा यहाँको ८ सय १३ बिघा क्षेत्रफल मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र परियोजनाको नाममा पुर्जा बनेको छ । १२ अर्ब लागतमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने योजनासहित २०७७ फागुन २१ मा शिलान्यास भएको थियो । त्यसयता पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका व्यक्तिले कब्जा गरेर बसेपछि जग्गा पाइन्छ भनेर औद्योगिक क्षेत्रमा आएर टहरा बनाएका छन् । सुरक्षा निकायका अनुसार करिब २ सय विघा कब्जा भएको छ । यसमा ४ सय टहरा बनेका थिए । यही टहरा हटाउने क्रममा यहाँ आइतबार झडप भयो र ठूलो मानवीय क्षति भयो ।
आइतबारको घटना पछि मोतीपुर क्षेत्रमा अर्को आदेश जारी नभएसम्मका लागि प्रशासनले कर्फ्यू लगाएको छ । तीन सय बढी सुरक्षाकर्मी परिचालित छन् । घाइतेमध्ये ४ सुरक्षाकर्मीसहित ८ जनाको अवस्था गम्भीर छ । ४ जनालाई थप उपचारका लागि काठमाडौं लगिएको छ । पेट्रोल बमले लागेका सुरक्षाकर्मीका हातमा छाला डढेको छ । प्रहरीको गोली लागेकाहरुको अवस्था जटिल छ । मृतकका आफन्त र जग्गा कब्जा गर्न गएकाहरु भने ढुंगा हानाहानमा सुरक्षाकर्मीले ताकेर गोली हानेर हत्या गरेको बताउँछन् ।
सुकुम्बासीको नाममा औद्योगिक क्षेत्रको कब्जा गर्नेमा स्थानीय छैनन् । सबै बाहिरी जिल्लाका छन् । विगतमा राजनीतिक दलहरुबीचको जस लिने होडमा यहाँ बाहिरी जिल्लाबाट आफू निकटका कार्यकर्ता ल्याएर सुकुम्बासी भएको देखाउने गरिएको थियो । फलस्वरुप उनीहरुले औद्योगिक क्षेत्रमा धमाधम टहरा बनाए ।
आइतबार प्रहरीले टहरा हटाउने सुइको पाएका जग्गा कब्जा गर्ने सुकुम्बासीदेखि हुकुम्बासीहरु १८ बढी जिल्लाबाट औद्योगिक क्षेत्रमा आएका थिए । झडप र मानवीय क्षतिपछि सोमबार भने यहाँ अतिक्रमण गर्नेहरु आएनन् । अब, राजनीतिक दाउपेचमा नलागी औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा संरक्षणमा सबैले साझा सहमति गरी अघि बढ्नुपर्छ । होइन् भने आइतबारको जस्तो अवस्था फेरि दोहोरिन नसक्ला भन्न सकिँदैन ।